Zvikonzero gumi nei Big Data Insights ichidiwa Yeawa - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Big Data, Big Data Analytics, Dhata Sayenzi, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Big data idambudziko guru. Kunyangwe iwe uchiziva kana kuti kwete, zvinoita basa rakakura muhupenyu hwako. Wakamboshandisa GPS munzira yako kuenda kunoshanda nhasi? Ndeapi ma tweets awakanyora nekutumira pazuva? Iwe waizokwanisa here kurangarira kuti ndeapi maemail awakavhura uye nekupindura? Chimwe nechimwe chezviitiko izvi zvidimbu zveruzivo rwusingazive rwakagadzirwa zvakadaro mune chero nguva kutenderera muether yeazvino digitaalinen zera.
Big data iri kupinda zvishoma nezvishoma matekinoroji ese kubva kumotokari dzinozvimiririra kuenda kuAI kuenda IoT (Indaneti yezvinhu), nemasangano ari kuenderera mberi nekudyara zvakanyanya mukati Big Dhata Kuongorora. Asi, muchiitiko chaunopedza zvisina chinangwa pakuvaka hwaro uye kutenga maturusi, pasina kunyatsofunga kuti ungawana sei Big Data manzwisisiro, panguva iyoyo, zvinongoita kukuvadza kwakawanda pane kubatsira kwako bhizimisi.
Heano gumi zviratidzo zvinonyatsoratidza kana iwe uchida rubatsiro nazvo inivhesitimendi in Big Data uye Analytics kuyedza kuti uwane mhedzisiro uye kukosha kwesangano rako:
1. Hapana chikonzero chekugadzirisa data
Ndekupi kwaunochengeta manhamba ako ehuwandu hwezvichemo zvebasa zvakayananiswa? Iwe ungazokwanisa kusiyanisa idzi nhamba neako mashandisiro emari mukati menguva yekunyunyuta?
Aya ndiwo marudzi emibvunzo inoda kupindurwa nevatengi vako. Nekuisa mari mu analytics, unogona kuvapa simba rekukwevera iyo ruzivo kumusoro mumasekonzi.
Iyo nyaya irimo isina kushandiswa kana kushandiswa data isina nzvimbo yekuenda. Izvi zvinogona kuve zvine chekuita nekunetseka kwenzvimbo uye maitiro ebasa. Chirongwa chekuongorora chinovapa zano rekupfura pachikumbiro che data rakarongeka rinokura.
Pasina kugona kuiongorora, vatengi vako havagone kugadzirisa yavo chaiyo ruzivo. Chii chimwe, chako Software sangano rinorasikirwa nemukana wekutora mukana wekuita mari pasina chekuongorora chishandiso uye BI.
Unoda mamwe manzwisisiro pa Big Data? Wobva wabata yako kopi yemahara ipo pano.
2. Nyaya dzine kuchinja
Kune iyo yakawanda chikamu, kufambira mberi kwekutenderera kunotanga ne diki dhata kuunganidzwa uye zvishoma nezvishoma kufambira mberi kubata nehukuru hukuru. Kana chirongwa chepasi pekushandisa chikaita sezvakange zvakatemerwa, asi kana zviitiko zvikaitika zvichitsauka, nyaya nekuchinjika dzinozove pachena. Naizvozvo, munhu anogona kunzvenga izvi zvachose nekushandisa masampuli akangwara ekuedzwa kwedatha kuti aongorore maitiro echishandiso panguva yakakosha.
3. Vanokwikwidza vako vari kuisa mari muData Analytics
Mazhinji emasangano pasirese ari kuronga kana kuti akatodyara mari mu Big Data analytics. Sevakwikwidzi vako vava vezvino kushandisa ino inokwanisa BI chishandiso uye kupedzisira wave ruzivo rwakawanda-rwunotungamirwa, iyi pateni ichakurumidza kuve chishuwo panzvimbo peimwe sarudzo yemasangano kutsemura kuburikidza nemakwikwi mumunda wavo.
Nekudaro, zvakakosha kuti iwewo uise mari mune izvi analytic zvishandiso kuti ugare uri pamberi muindasitiri yako uye vanokwikwidza mumusika.
4. Yega-yega nguva yekudyara
Mazhinji esangano anokurukura zvinodikanwa zvetsika inotungamirwa nedata iyo inopa hutungamiri huri nani padanho rega rega. Asi, vatungamiriri vazhinji vepazasi havasvike pakuona sezvo IT isina yakakwana yekufambisa simba kuti ibatsire kambani yese Big Data zvinoda.
Tsika yechokwadi inofambiswa nedata inobvumira vatungamiriri vese nekukurumidza uye nekugona kuzvisarudzira ivo pachavo. Paunenge uchigadzira chirevo zvinongotora maminetsi makumi matanhatu (kana mashoma), yako analytics bhizinesi rinogona kutanga kuita mhedzisiro yakanaka.
5. Inobatanidza IT department uye iwe neako BI ripoti
Muchiitiko chekuti yako IT hofisi inodzora rese data data, kuburitsa mishumo kunogona kushanduka kuita mutumwa. Kugadzira mishumo pasina chirongwa cheBI, kunyanya akaomarara maripoti kana madhibhodhi, zvinoda mumwe munhu ane hwaro hwehunyanzvi uye nenzira iyi anopa masimba asiri-ehunyanzvi vatengi kuti vatarisire paIT.
Kana iwe uchiramba uchikumbira kuti chikamu chako cheIT chichinje uye kushandura mishumo, izvi zvinogona kukurudzira kurambidzwa nekumisikidza kwenguva refu mukupedza basa. Ichi chiratidzo chisinga fungidzike kuti mukana wakanaka wekutumira data kune vanhuwo zvavo vanonyanya kubatsirwa kubva pakuongorora iyo data yekusangana. bhizimisi zvinangwa: ivo bhizimisi Vatengi.
Chero chakasimba BI chishandiso chine yakakwana, yakasarudzika UI inogonesa mabhizinesi kugadzira yavo mishumo uye kuve nekwaniso yekuisa kana kugadzirisa chero BI dashboard.
6. Ronga kusimbisa Asset
Nemhando nyowani yedata iri kushandiswa sechikamu chekushandisa uye masisitimu, zvichanetsa kushandisa zvakajairika matekiniki ekuongorora ruzivo uye kugamuchira nzwisiso. Nekudaro, mabhizinesi anofanirwa kugadzirisa maitiro avo kuti akodzere kufambira mberi kutsva.
Pamusoro pezvo, mapoka mazhinji eIT akakura tekinoroji yepamberi, akadzora kumashure uye akadzikisa kugona kwavo mukuvaka nekuyananisa. Makambani akadaro haasi mumamiriro ezvinhu ekugadzirisa shanduko yekukurumidza mune yavo yakakosha hunyanzvi.
Masangano akadzora midziyo nemari, achafunga kuti zvinodhura kuita basa. big data mabhindauko, kunyanya pamwero mukuru. Nekudaro, ivo vanofanirwa kutsvaga hurongwa hutsva hwekugadzira, semuenzaniso, nzira dzinofambiswa nemetadata dzisingangodzikisi mutengo, nekuwedzera, kudzikisira njodzi.
7. Yako Ekutengesa Mishumo haiongorore zvakadzama
Zvichida wanga uchitevera kutengeswa kwePOS uchishandisa chirongwa chekutungamira kwedhata chinoratidza ruzivo rwako rwemari mune yakasarudzika dashibhodhi kana kuita zvirevo zveongororo. Kunyangwe paine chokwadi chekuti izvi zvinopa maonero epamusoro-soro ekutengeswa kwako kwekutengesa, kuti unzwisise zvechokwadi zvinhu zvekutyaira zvibvumirano kana kuzvikwevera pasi, zvakakosha kuti usvike kune zvakavanzika zvikamu zvemadhipatimendi ega, zvitoro, kupatsanurwa, zvigadzirwa uye kunyangwe zvigadzirwa nemasevhisi.
Iyo yakanyanya kugadzirwa yekutengesa analytics masisitimu anopa mamwe akasarudzika madhibhodhi uye mishumo inoratidzira tsika mafirita, hierarchies, uye inokwanisa kudzidziswa kubva mukati memushumo. Chaizvoizvo, kubata pane imwe rondedzero, metric, kana pateni inogona kuunza iwo masikirwo aunoda kuti uenderere mberi.
8. Maitiro ako Ekuongorora Dhata achabuda
Data haisi nhamba chete mu a Database. gutsikana, zvakarekodhwa, uye mavhidhiyo anogona kupawo zivo inobatsira; maturusi chaiwo anogona kutoona mamwe mafambiro tichitarisa zvakafanotsanangurwa maitiro. Zvakawanda zveizvi zvinoitika nekushandisa hunhu hwekushandisa mitauro, iyo inogona kuratidza yakakosha kumigodhi yemavara, mutauro wekiriniki, manzwiro ongororo, uye zita zita kutevedzera kunoedza.
9. Kuwedzera Kuchengeteka kusangano
Ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvakakosha masangano anoda kuisa zviwanikwa muBI. Iine ruzivo rwakawanda rwakaunganidzwa nemasangano, inouya iyo njodzi yekutyora ruzivo kupi bhizimisi data haibatsiri pakubira. Kuongororwa kwedata kunogona kugonesa makambani kuchengetedza data ravo kubva kune njodzi dzekunze. Semuenzaniso, kudzoreredza uye ongororo yemaitiro algorithms inogonesa masangano kuona chero rudzi rwekuita zvekufungira kana kusawirirana kungangoita.
10. Tsvaga mikana mitsva yebhizimisi
As Big Data Analytics ramba uchikura, vatengi vazhinji vari kunzwisisa ruoko rwepamusoro rwekuita basa rinotungamirwa.
Nzvimbo dzekudyidzana pasocial network dzakasiyanisa nzvimbo dzekuvhura kuti dziwane mari kubva ku data ravanounganidza nekutengesa kushambadza zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi. Izvi zvinopa masangano mukana wekutarisa vamwe vanhu vanokodzera tarisiro profil kana akakwana mutengi.
Kambani yega yega ine imwe nhanho yekuwanikwa uye inodiwa analytics. Zvisineyi, masangano ese anofanirwa kuenda kunokurudzira kukurudzira kwakawanda kubva mukudyara kwavo.Paunosarudza kuisa mari mu big data maturusi enjere, ita shuwa kuti kambani yako inogadzirira BI chirongwa uye inotora chishandiso chinokodzera yako bhizimisizvinodiwa nhasi uyewo mune ramangwana. Gadzirira kushamisa nyika, tanga zvidiki, uye ramba uchienda kune dzimwe nzvimbo dze bhizimisi.
Iva Big Data chirongwa mumusoro mako? Wobva wasvika kwatiri kuti tibvunze.